Nypians' Humanitarian Helps to Nargis Cyclone Victims
Clubnypian :: Official Board (သတိ.. ပြောပြမည်) :: Announcement Share |
Subject: Nypians' Humanitarian Helps to Nargis Cyclone Victims Tue May 13, 2008 5:44 pm
ပြီးခဲ့သည့် မေလ ၂ ရက်နေ့ ညပိုင်းမှ စ၍ တစ်နာရီ မိုင် ၁၀၀ မှ ၁၅၀ အတွင်း ပြင်းအားရှိတဲ့ နာဂစ်(Nargis)မုန်တိုင်းသည်
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရန်ကုန်တိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ကရင်ပြည်နယ် နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် စတင်တိုက်ခတ်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာပြည်သူများသည် ဘဝတစ်လျှောက်တွင် တစ်ခါမှ မကြုံစဖူး ဆိုးရွားသည့် သဘာဝဘေုးဒဏ်ကို ခံစားနေရပါသည်။ ရန်ကုန်
လေဆိပ်ကို ပိတ်ထားရပြီး၊ လျှပ်စစ်မီးများ ပျက်တောက်နေပါသည်။ ဖုန်းလိုင်း အချို့သာ အဆက်အသွယ်ရပြီး၊ အင်တာနက်
အဆက်အသွယ် လုံးဝမရပါ။ ရန်ကုန်မြို့အပါအဝင် အခြားမြို့များတွင် ရေကြီးနေပြီး၊ သစ်ပင်များ လဲနေပြိုနေပါသည်။
အိမ်အချို့လည်း ပြိုကျပျက်စီးနေသည်ဟု သိရပါသည်။ မုန်တိုင်းပြီးသွားသည့် အချိန်တွင် ဆက်လက်၍ ဖြစ်ပေါ်လာမည့်
နောက်ဆက်တွဲ လူမှုဒုက္ခများကို မြန်မာပြည်သူများ၊ ဆက်လက် ခံစားကြရဦးမည် ဖြစ်ပါသည်။
ကမ္ဘာတဝန်းလုံး ရှိ နိုင်ငံမျိူးစုံ၊ အဖွဲ့အစည်းမျိူးစုံတို့မှ လူသားချင်း စာနာ ထောက်ထား သောအားဖြင့်
လေဘေးသင့်ဒုက္ခသယ်များအား အလူငွေများ၊ အစားအစာ၊ ဆေးဝါး၊ အ၀တ်အထည်နှင့် ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများကို နည်းမျိုးစုံဖြင့်
တတ်စွမ်းသ၍ ကူညီကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်နေကြတာကို ကျနော်တို့အားလုံး မြင်သိ ကြားသိ ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အတူ ကျနော်တို့
နန်ယန်း မြန်မာကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများမှ လည်း ထိုသို့သော ထောက်ပံ့ကူညီရေး ဆောင်ရွက်ချက်များ၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသ၊
အုပ်တချပ် သဲတပွင့် အနေ နှင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည့် အလုိ့ငှာ ယခင်တပတ် ကြာသာပတေးနေ့ (၀၈.၀၅.၀၈) မှ စနေနေ့
(၁၀.၀၅.၀၈) ထိ ပထမအသုတ်အနေနှင့် အလူငွေနှင့် အ၀တ်အထည်များ ကောက်ခံခဲ့ပြီး တနဂ`်နွေနေ့ (၁၁.၀၅.၀၈) တွင်
လမ်းပြကြယ်မြန်မာစာကြည့်အသင်း သို့ လူဒါန်းပြီးဖြစ်ပါတယ်။ လူဒါန်းပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်တွင်
လမ်းပြကြယ်အနေနှင့် နေ့စဉ်ကောက်ခံရရှိသော အလူငွေများကို ရန်ကုန်ရှိ နာရေးကူညီမှူ့ အသင်းကြီးအား နေ့တွင်းချင်း
လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပြီး ထိုအသင်းမှတဆင့် ရန်ကုန်မြို့ ဘုန်းကြီးကျောင်း များတွင် ခိုလှူံလျက်ရှိသော ဒုက္ခသယ်များအား ဆန် နှင့်
ဆေးဝါးလိုအပ်ချက်များကို အဓိကထားဖြည့်ဆည်း ပေးလျက်ရှိသည်ဟု သိရပါတယ်။ အ၀တ် အထည်များ ကိုတော့ လတ်တလော
နေ့စဉ်ပျံသန်းလျက်ရှိသော အချို့ ခရီးသယ်များ မှ ကီလိုများသယ်ဆောင်လျက်ရှိပြီး (ရန်ကုန်အပြန် ပစ္စည်းကူညီ
သယ်ဆောင်လိုလျင် လမ်းပြကြယ်နှင့်ဆက်သွယ်ပါက လေဘေးကူညီ အထုပ်များသယ်ရန် လေကြောင်းမှ ကီလို ၅၀ ထိ
ခွင့်ပြုထားသည်ဟု သိရပါသည်)၊ ကျန်ပစ္စည်းအထုပ်များအား ကွန်တိန်နာတစ်လုံးစီ ပြည့်တိုင်း ရေကြောင်းမှပို့ဆောင်သည်ဟု
Last edited by yks on Tue May 20, 2008 3:51 am; edited 21 times in total
Subject: Re: Nypians' Humanitarian Helps to Nargis Cyclone Victims Tue May 13, 2008 5:48 pm
ဒုတိယ အသုတ်နေနှင့် လာမည့် ၂၄ ရက်နေ့ (မေလ) စနေနေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး အလူငွေနှင့် အ၀တ်အထည်များကို စုဆောင်း
ကောက်ခံ သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူဒါန်းရာ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို ဒီစာမျက်နှာ မှာကြည့်ပါ။ လမ်းပြကြယ် (City Hall,
5th fl Penisula Plaza) သို့ တိုက်ရိုက်လူဒါန်းလိုပါက နေ့စဉ် (ရုံးဖွင့်ရက် ညနေ ၆ နာရီမှ ၉ နာရီခွဲ နှင့် ရုံးပိတ်ရက် နေ့လယ် ၁၂
နာရီမှ ညနေ ၉ နာရီတိ) သွားရောက်လူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။
လေဘေးဒုက္ခသယ် များအားပိုမိုထိရောက်စွာကူညီနိုင်ရန် နှင့် လူသားခြင်းစာနာစွာ ကူညီထောက်ပံ့ လူဒါန်းလိုကြသော တခြားသော
(နိုက်ပီယံ မြန်မာတို့အပြင်) နန်ယန်းကျောင်းသူ/သား များအားလုံး အတွက် ကျနော်တို့ အနေနှင့် Singapore Red Cross
အသင်းနှင့်ပူးပေါင်း၍ ကျောင်းပရဝုင်္ဏံ အတွင်းအလူငွေကောက်ခံနိုင်ရန် ကျောင်းမှ ခွင့်ပြုချက်လျောက်ထား
What is LanPyaKyel?
How's their delivering process?
International Donation News
Where else we can donate in SG?
Click here for more photos--->
As mentioned above, there are donated cash S$285/- in total and 20 goodie bags for the first round of Collection. Please do not hesitate to hit us for any false declaration.
Last edited by yks on Tue May 20, 2008 3:51 am; edited 24 times in total
Subject: Re: Nypians' Humanitarian Helps to Nargis Cyclone Victims Wed May 14, 2008 10:36 am
This is just our first step and we already arranged for next round to collect supportive items that you are willing to donate. We will still collecting those items till 24 May 2008 (Saturaday). As like first round, you can donate your cash and items to this (see detail here). After next round, I dont think they gonna make another arrangement. But dont worry! you can still go Lan Pya Kyal and donate.
Last but not least, We are going to collect donation money over NYP. We already made agreement with SRC(Singapore RED Cross) to donate all collected cash. SRC will be taking good care to support and rescue people in BURMA who needs help.
Process is we proposed Student Affair Office and MOE to get approval of our donation. So that we can place poster and collect money at BLK P south canteen, BLK A Kofu,Mc Donald, BLK E north canteen.
Since there are thousands of student in Campus. Even single cent from every student might save many lives.
And We do need help to collect cash at above mentions blocks and canteens. There will be5days onwards (10am - 4pm) once approved. SRC seem to provide us donation boxes and banners. Fortunately, there is Graduation ceremony next week. I pray and hope to get approval in this week. So that we can start from next Monday. Short to the point, we need volunteers to get it accomplish and to save our blood. Please be provide your name to following people if you are really willing to help us or help Burma. Engineering or Nursing Whatever.
Note: Time will be re-arranged once the date is confirmed.
Sign Up @ - Nyan Lin Htay (91441259), Kaung Pyae Thein (81138027), Zin Ko Ko Min(82981807),
Phoe Mu (92393617)
Subject: Re: Nypians' Humanitarian Helps to Nargis Cyclone Victims Tue May 20, 2008 12:23 am
The Student Affair Office( SA) and Office of International Student (OIS) will be working toether with the NYP Students Union in leadingadomation drive on campus in support efforts by the Singapore Red Cross (SRC) to help Survivors Of Myanmar 's Cyclone Nargis and The Sichuan China Earthquake. NYP Student leaders will be collectiong donations from 22 - 30 May 2008 From 11am to 3pm at the following locations.
- Student Affair Office (BLK E Level 4)
- NYP Library
- Corridor outside Fast Food Canteen,
- North & South Canteens,
- Atrium (From 26 - 30 May After The Graduation Ceremony)
Inaddition, special collections will also be made at MONOCHROME, the NYPSU's Jam & Hop on 23 May at the Spots Hall as well as Foreign Bodies and Harmonica Ensemble's Lunchtime Performance at the Library on 21 May (Wednesday).
PS: the cash money will be collected at the end of each day and after5days, NYP will hand over the donations money in cheque. I still not yet known the details of that.
There is the only way we can deal with NYP and SRC. In our proposal, we already mentioned what we need and what we want. In meantime, china also having kinda disaster and now reaching 50,000 of deaths. Since we are talking about Humanitarian, we are just cant be patriot, we should be humanitarians as well. Anyway you still can contact us to donate cash and supportive items.
Subject: Re: Nypians' Humanitarian Helps to Nargis Cyclone Victims
Clubnypian :: Official Board (သတိ.. ပြောပြမည်) :: Announcement